Dr. Nuur Jimcaale oo ka horyimid Xil ka qaadis ay ku sameeyeen Gollaha Wasiirada Soomaaliya | SAHAN ONLINE
Dr. Nuur Jimcaale oo ka horyimid Xil ka qaadis ay ku sameeyeen Gollaha Wasiirada Soomaaliya
MUQDISHO – Hanti dhowrihii guud ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale oo xilka ka qaadeen Gollaha Wasiirada Soomaaliya khamiistii shalay ayaa ku tilmaamay go’aankaas mid sharci darro ah isla markaana aysan awood u lahayn in ay xilka ka qaadaan.
Dr. Nuur Faarax Jimcaale ayaa sheegay in Gollaha Wasiirada Soomaaliya ay keliya leeyihiin soo jeedin loona baahan yahay in gollaha Baarlamaanka ay cod aqlabiyad leh ay ku ansixiyaan xil-qaadista isla markaana Madaxweynuhu digreeto kusoo saaro.
Waxaa jiray qoraalo marar badan oo hore aan qoray oo aan ra’iisal wasaaraha uga digayo in uu faragalinta ka daayo hanaanka maaliyada, sidoo kale waxaa jiray qaladaad uu ku kacay wasiirka warfaafinta oo si aan sharci aheyn labo mas’uul oo wasaarada warfaafinta ka tirsan xilka uga qaaday..:” Dr Nuur Faarax, ayuu yiri, oo tilmaamaya in markii horeba ay is qaniinsanaayeen golaha xukuumadda.
Wuxuu meesha ka saaray in xil ka qaadistiisu ay xiriir la leedahay dilkii loo geystay AUN Wasiirkii howlaha guud ,wuxuuna ku eedeeyey Ra’iisal Wasaaraha iyo xeer ilaaliyaha qaranka iney iska kaashadeen in tallaabo laga qaado.
Hanti dhowraha ayaa ugu dambeyn sheegay in Dastuurka uu kala saari doono isaga iyo gollaha Wasiirada ee xilka ka qaaday isla markaana aysan jirin cid sharciga ka weyn.